I-Grand Villa eGreen Fiji Plantation
Taveuni, Northern Division, i-Fiji
I-i-villa ephelele ibungazwe ngu-J. K. And Irina
*SICELA UBUZE NGEZINDLO Zendawo!
*Phakathi nale sizini, sithatha izinyathelo zokuqapha ukuze sihlanze i-villa yethu njalo hhayi kuphela ngemikhiqizo yokuhlanza kodwa nangomshini we-ozone.
I-Grand Villa endaweni yakho yangasese yamahektha ayi-100 kakhukhunathi! Ihlathi eliluhlaza liyanyamalala libe ukubukwa kolwandle oluluhlaza okwesibhakabhaka, liphazanyiswe kuphela izihlahla zesundu ezinde ezinyakaziswa umoya, ngaphandle komakhelwane esizeni, esiqhingini esingadini saseTaveuni, eFiji. Le villa ingakwazi ukuhlalisa abantu abangafika kwabayisi-8, futhi ilungele imindeni, izindawo zokuhlala ezincane, njll.
Le villa yesimanje yaphakathi nekhulu leminyaka iqhwakele phezu kwegquma elibheke ulwandle nobuhle bemvelo obumangalisayo besiqhingi sasengadini saseFiji, eTaveuni, ngaphandle komakhelwane obonakalayo. Yindawo inhliziyo yakho engasoze yayikhohlwa. Abasebenzi abagcwele abapheki, abahlanzi bezindlu, nabagadi baphansi bayokwenza ukhululeke ukuze ujabulele isikhathi sakho sokuphumula kuleli pharadesi elihle. Uzoba namagumbi okulala angasese angu-3: igumbi lokulala eliyinhloko elinombhede olingana nenkosi, igumbi lesibili elinemibhede emibili eyodwa noma umbhede wenkosi ongu-1, kanti elesithathu linombhede osayizi wendlovukazi wonke anokugeza okuhlukile kwe-en-suite neshawa. Ikamelo ngalinye lihlelwe kahle ngokhuni oluqinile lwasezindaweni ezishisayo, uqalo, nezindonga zamatshe, nosinki wesitsha segwadle. Igumbi ngalinye likhiywa ngalinye linesefa yokuvikeleka, futhi lixhunywe ngomnyango ogobile kahle endaweni yokuphumula ebanzi enekhishi lohlelo oluvulekile lokuhlangana komndeni. Izitezi zokhuni oluqinile ezitshalwe endaweni ezishisayo zivuleleka kuvulandi, lapho ukuhlwa kwakho kuqala ngokushona kwelanga uzungeze itafula legwadle elihlalisa abantu abangu-14 ezungeze amalangabi aluhlaza okwesibhakabhaka kanye negolide womgodi womlilo osetafuleni. Njengoba ukushona kwelanga okuwolintshi kufiphala kube okupinki, okunsomi nokuluhlaza okwesibhakabhaka futhi ubumnyama buveza izinkanyezi eziningi kunalokho owake wazibona, ngeke ukhumbule ukuthi ubusuku bakho buphela nini futhi amaphupho akho aqala nini.
Ipulazi likakhukhunathi elingamahektha ayi-100 kanye nepulazi elisebenzayo elizungeze umgwaqo ohamba ngezinyawo oholela eVilla, kungekho makhelwane obonakalayo.Lapho ilanga lishona nezinkanyezi ziphuma, ungakwazi ukubala isibalo sabantu abenziwe izibani ngakwesinye isandla. Inokuthula kakhulu futhi iyimfihlo.
Ibungazwe ngu-J. K. And Irina
Singakwazi ukuklama imisebenzi ezobhekana nezithakazelo zakho noma ngabe ukutshuza emanzini kanye nokushushuluza i-snorkeling esezingeni lomhlaba i-Somosomo strait/Rainbow Reef, uhambo lolwandle, ipikinikini esiqhingini esizimele, ukubhukuda emachibini angaphansi kwezimpophoma ezinhle, ukuvakasha kwepulazi, ngokwezifiso zemisebenzi yamasiko yase-Fiji. elungiselelwe idolobhana lakithi eliseduze lapho abasebenzi bevela khona, noma ukuzijabulisa kancane ngomjiko wethu omkhulu. Izindleko zemisebenzi ziyahlukahluka ngokuya kwesikhathi, ezokuthutha kanye nokuhanjiswa.
Esimeni esiphuthumayo, othintana naye wokuqala kufanele kube umnakekeli wendawo, Vono, kokuthi +(INOMBOLO YOFONI EFIhliwe). Ngokuvamile sinomakhalekhukhwini wendlu ongawusebenzisa ngesikhathi sokuhlala kwakho. Alukho ucingo lwasendlini. Ukusuka e-Fiji ocingweni lwe-Fiji, udinga kuphela ukudayela izinombolo zokugcina eziyi-7.
Uma kwenzeka udinga ukufinyelela kumnikazi, izinombolo zimi kanje:
Iselula ye-Fiji: +(INOMBOLO YOFONI IFIHLIWE)
US mobile: +(PHONE NUMBER HIDDEN)
Singakwazi ukuklama imisebenzi ezobhekana nezithakazelo zakho noma ngabe ukutshuza emanzini kanye nokushushuluza i-snorkeling esezingeni lomhlaba i-Somosomo strait/Rainbow Reef, uh…
Idiphozithi Yesibambiso - uma ulimaza ikhaya, kungenzeka ukhokhiswe imali efikela ku-$950.
Hlola ezinye izinketho ezise- Taveuni namaphethelo